Sina Boom mampiroborobo efijery fanamboarana sy ozinina | Fitaovana fanamaivanana Chengxin
Ny efijery Xbzs boom vibrating dia manana ireto toetra manaraka ireto raha oharina amin'ny vokatra mitovy aminy: ny firakofana dia mirona ary ny zoro dia eo anelanelan'ny 20 ° sy 35 °
1. Zoro fironana lehibe, volavola kely ary fahafaha-manao fitiliana lehibe.
2. Mavesatra maivana, mora apetraka ary manamboatra layout.
3. Kely ny fanjifana angovo, afaka mamonjy angovo betsaka.
4. Ny vidiny ambany ary ny habetsaky ny kozatra dia kely dia kely.
5. Ny fahombiazan'ny fisavana ny efijery dia manodidina ny 20% ambony noho ny an'ny écran ankapobeny, ary manana ny asan'ny fanadiovan-tena.
Fitsipika miasa: ny masinina dia misy boaty efijery, motera mientanentana na exciter, rafitra malemy ary underframe. Ny boaty efijery dia misy sarin'ny efijery, takelaka fisaka ary takelaka fisorohana. Ny boaty efijery dia entin'ny motera vibration roa mitovy na motera mahazatra miaraka amin'ny exciters vibration mba hihodina amin'ny lalana mifanohitra, ka ny vatan'ny efijery iray tohanan'ny mpanohana ny hatairana dia hihoraka amin'ny tsipika mahitsy. Ny fitaovana dia latsaka ao amin'ny efijery avy amin'ny faran'ny sakafo ary mandroso haingana, mamaha, miditra ao amin'ny efijery ary mamita ny fizahana fizahana.
Fitaovana ara-drafitra: ity andiana milina fakan-tsarimihetsika ity dia mandray ny maotera navoakan'ny serivisy yzo miaraka amin'ny fahombiazana avo lenta sy fiainana lava ho loharanom-pifaliana Ny amplitude ny masinina lamba dia azo ovaina amin'ny fanitsiana ny hery mampientam-po ny loharano hovitrovitra. Ny rafitra fanalefahana dia misy lohataona fingotra, clamp ary seza fanohanana. Ny underframe dia voaforon'ny fefy silo sy chassis. Ny fomba fametrahana loharano mampientanentana an'ity andiana efijery mihetsiketsika ity dia azo zaraina ho karazany hovitrovitra ambony sy karazana hovitrovitra ambany. Ny fomba fametrahana ny absorber shock dia azo zaraina amin'ny karazana seza na ny karazana mihantona. Izy io koa dia azo amboarina sy amboarina mifanaraka amin'ny filan'ny mpampiasa.
Previous: Pikantsary mihetsiketsika ambony sy ambany
Manaraka: Ya (k) andian-tsarimihetsika boribory goavambe
Sarimihetsika mihetsiketsika matetika
Sarin-tsivalana mihetsika eo amin'ny tsipika